Onye OnePlus 8 na 8 Pro na-enweta mmelite ngwanrọ mbụ ha Gam akporosis
Onye OnePlus 8 na 8 Pro na-enweta mmelite ngwanrọ mbụ ha
Ihe dị ka ụbọchị anọ gara aga anyị nwetara ọhụụ ọhụụ nke asatọ OnePlus ezinụlọ, nke, dịka ị nwere ike ịmaraworị, bụ nke ndị mejupụtara OnePlus 8 na 8 Pro. Ekwuru na ihe nlere nke atọ ga-abịarute ndị a n'otu ụbọchị nke mmalite, mana agọnarị nke a dịka ọ na-emeghị.
Ma mobiles bụ elu-arụmọrụ. Ya mere, ha nwere nke kacha mma nke kacha mma. Otú ọ dị, ha na-eche mgbe niile maka mmelite ọhụrụ, nke a na-agbakwunye site na mmelite ngwanrọ na oge niile, nke a bụ ihe metụtara ngwaọrụ ndị a n'oge a, n'ihi na ụlọ ọrụ China ekwuputala ọkwa OTA, nke mbụ, maka njedebe abụọ, nke putara na ihe ijuanya ebe obu na odidozighi izu obula eweputara usoro a.
1 Nkwalite OTA mbụ maka OnePlus 8 na 8 Pro dị ebe a
1.1 Nka na ụzụ data nke OnePlus 8
Nkwalite OTA mbụ maka OnePlus 8 na 8 Pro dị ebe a
Na ajụjụ, ọ bụ ụdị ahụ OxygenOS 10.5.4 (dabere na gam akporo 10, n'ezie) nke a na-enye ugbu a maka duo a. Nke a na-abịa na ọtụtụ ndozi, mgbanwe, ndozi, na ndị ọzọ. Ihe mgbanwe zuru ezu fọdụrụ n'okpuru:
Ndozi usoro emelitere.
Ngosiputara akara ngosi di na ogwe ọkwa.
Ahụmịhe mmegharị azụ emelitere.
OnePlus Bullets Wireless Z nwere ike ijikọ ya na Dolby Atmos ugbu a maka mma ụda ka mma
Agbakwunyere ọrụ okpukpu abụọ iji rụọ ọrụ mkpọchi mkpọchi na ngosipụta ngosipụta ma ọ bụ ihuenyo.
Agbakwunyere OnePlus Atụmatụ na Nkwado ngalaba na Ntọala. Hụ atụmatụ ọhụrụ na azịza maka nsogbu ndị nkịtị ebe a.
Agbakwunyere ederede dị ndụ, nke a ga-achọpụta okwu na mgbasa ozi ma na-ewepụta nkọwapụta na akpaghị aka [Iji mee ka: Ntọala-Usoro Accessibility-Live Captions].
Melite ihe nchedo gam akporo na 2020.03.
GMS ngwugwu emelitere na 2020.02.
Kachasị mma igwefoto igwefoto na mmụba kwụsiri ike.
Kachasị anya mmegharị ahụ ma melite ahụmịhe mmekọrịta.
Ihe ntinye vidio gbakwunyere.
Kachasị akara mkpisiaka lokpọghe ahụmahụ mgbe akpọchi ngwaọrụ.
Gbakwunyere ozi kọntaktị maka oku mbata.
Njikarịcha nke arụmọrụ na nkwụsi ike nke nnyefe data na netwọk.
Mmelite olu olu
Ugbu a ị nwere ike rụọ ọrụ olu olu nke ịhọrọ site na iji ogologo pịa nke bọtịnụ ike [Iji mee ka: Ntọala-bọtịnụ na mmegharị ahụ-Pịa ma jide bọtịnụ ike-Họrọ ngwa ịchọrọ ịrụ ọrụ].
Enweghị oge ọzọ, anyị biputere tebụl nke nkọwapụta teknụzụ nke njedebe abụọ n'okpuru:
Nka na ụzụ data nke OnePlus 8
IKIRU 6.55-inch Fluid Fluid AMOLED + FullHD + mkpebi (2.400 x 1.080 pikselụ) + 20: akụkụ 9 + 402 dpi + 90 Hz + sRGB Ngosipụta 3 6.78-inch Fluid Fluid AMOLED - 60/120 Hz na-enye ume ọhụrụ - 3D Corning Gorilla Glass -SRGB na Ngosipụta P3 nkwado
Nhazi Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865
Ram 8 ma ọ bụ 12 GB LPDDR4 8 ma ọ bụ 12 GB LPDDR5
Ohere TERLỌ N'IME 128 ma ọ bụ 256 GB (UFS 3.0) 128 ma ọ bụ 256 GB (UFS 3.0)
Ndị isi Azụ: Sony IMX586 48 MP (0.8 µm) f / 1.75 na OIS + EIS + Macro 2 megapixels (1.75 µm) f / 2.4 + “Ultra Wide” 16 MP f / 2.2 (116º) / Dual LED Flash - PDAF + CAF - Ihu: 16 MP (1 )m) f / 2.0 na elebara anya na EIS Azụ: Sony IMX689 48 MP f / 1.78 na 1.12 μm pixel size - OIS na EIS + 8 MP f / 2.44 "Telephoto" na 1.0 μm pixel size - OIS (3x ngwakọ ngwa anya mbugharị - 20x digital) + "Ultra Wide" Sony IMX586 48 MP f / 2.2 na 119.7º nke echiche + 5 MP f / 2.4 agba nyo igwefoto + Dual LED Flash + Multi Autofocus (PDAF + LAF + CAF) - Ihu: 471 MP f / 16 Sony IMX2.45 nwere 1.0 pim pixel size
UMUAKA 4.300 mAh na ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ ọkụ 30T na 30W 4.500 mAh na-agba ọsọ ọsọ 30T na 30W na Warp Charge 30 Ikuku na-akwụ ụgwọ na 30W
OS Gam akporo 10 na oxygen oxygen Gam akporo 10 na oxygen oxygen
Njikọ Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 na nkwado aptX - aptxHD - LDAC na AAC - NFC - GPS (L1 + L5 Dual Band) - GLONASS - BeiDou - SBAS - Galileo na A-GPS Wi-Fi 2 × 2 MIMO - Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / anyu - 2.4G / 5G - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1 nwere nkwado maka aptX - aptX HD - LDAC na AAC - NFC - Dual band GPS + GLONASS - Galileo - Beidou - SBAS na A-GPS
Atụmatụ ndị ọzọ Alert Slider - stereo ọkà okwu na Dolby Atmos - na ihuenyo mkpịsị aka agụ - USB 3.1 Type C na Dual Nano-SIM Alert Slider - haptic vibration motor - Dolby Atmos audio - on the screen optical fingerprint reader - face unlock - USB 3.1 Type C na abụọ nano SIM
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Onye OnePlus 8 na 8 Pro na-enweta mmelite ngwanrọ mbụ ha
Oppo A92S bụ ọrụ: ekwentị 5G ọhụrụ nwere ihe nhazi 800 dị ukwuu